အမစေုမှ “ကမ်ဘာကွီးအားပေးလိုကျသော မကျဆေ့” – Myanmar Media
အမစေုမှ “ကမ်ဘာကွီးအားပေးလိုကျသော မကျဆေ့”
ဘယျလိုဥပဒဘေဲဖွဈဖွဈ ကမြတို့လိုကျနာကွရမယျ၊ရှငျတို့ ကမြကို မတရားတဲ့ ဥပဒတှေနေဲ့တရားစှဲ စီရငျခကျြတှေ အမြိုးမြိုးခခြဲ့သမြှ ကမြဘယျတုနျးကငွငျးဆနျခဲ့ဖူးသလဲကမြ ဘယျလိုတုံ့ပွနျခဲ့ဖူးသလဲ။
နိုငျငံသားကွီးသားပီသစှာ ဥပဒကေို လေးစား လိုကျနာရမယျဆိုတဲ့အကွောငျးကမြ နိုငျငံသားတှကေိုစံပွပေးရငျး ရှငျတို့ အပွဈဒဏျခသြမြှ ကမြရငျဆိုငျ ခံယူပွခဲ့တယျလေ။
ခုလညျး ကမ်ဘာကွီးက ဥပဒအေရ ကမြနဲ့ ရှငျတို့ကို တရားဥပဒအေရ စှဲခကျြတငျတာကမြတို့ရငျဆိုငျရမှာဘဲ။ဒီနရောမှာလညျး ကမ်ဘာကွီးရဲ့ ဥပဒေ တရားသညျဖွဈစေ မတရားသညျဖွဈစကေမြတို့ ခုခံကာကှယျလြှောကျလဲရငျး စီရငျခကျြကိုကမြတို့ စံပွအဖွဈ လိုကျနာသှားကွဖို့ ကမြကိုယျကမြဆုံးဖွတျထားတယျ။
ဥပဒေဆိုတာ လေးစားလိုကျနာရတဲ့အကွောငျး ကမြကိုယျကိုအရငျးတညျပွီးစံပွအဖွဈ ခံယူသှားမယျ၊ ဥပဒကေို ခြိုးဖောကျရငျ ဥပဒရေဲ့ စီရငျခွငျးကိုခံရမှာ ဓမ်မတာပါဘဲ။ ကမြရဲ့ ကွောကျရှံ့ခွငျးမှကငျးဝေးရာဆိုတဲ့စာအုပျ အလကားရေးထုတျခဲ့တာမဟုတျဘူး။
ကမြရဲ့ ယုံကွညျရာ ကမ်ဘာကွီးကို စံနမူနာပွဖို့ ကမြကိုယျနဲ့ရငျး ရေးထိုးပွခဲ့တာ။ ရှငျတို့လညျး ကမြလို သတ်တိရှိဖို့ ပွငျဆငျခဲ့ကွ…ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ….
မွနျမာပွညျကွီးလညျးရှငျလနျး ခမျြးမွပေ့ါစဗြေ။ပွညျသူမြားအားလုံးပဲ ရှငျလနျးခမျြးမွကွေ့ပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဘယ်လိုဥပဒေဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့လိုက်နာကြရမယ်၊ရှင်တို့ ကျမကို မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲ စီရင်ချက်တွေ အမျိုးမျိုးချခဲ့သမျှ ကျမဘယ်တုန်းကငြင်းဆန်ခဲ့ဖူးသလဲကျမ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့ဖူးသလဲ။
နိုင်ငံသားကြီးသားပီသစွာ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမ နိုင်ငံသားတွေကိုစံပြပေးရင်း ရှင်တို့ အပြစ်ဒဏ်ချသမျှ ကျမရင်ဆိုင် ခံယူပြခဲ့တယ်လေ။
ခုလည်း ကမ္ဘာကြီးက ဥပဒေအရ ကျမနဲ့ ရှင်တို့ကို တရားဥပဒေအရ စွဲချက်တင်တာကျမတို့ရင်ဆိုင်ရမှာဘဲ။ဒီနေရာမှာလည်း ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဥပဒေ တရားသည်ဖြစ်စေ မတရားသည်ဖြစ်စေကျမတို့ ခုခံကာကွယ်လျှောက်လဲရင်း စီရင်ချက်ကိုကျမတို့ စံပြအဖြစ် လိုက်နာသွားကြဖို့ ကျမကိုယ်ကျမဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ဥပေဒဆိုတာ လေးစားလိုက်နာရတဲ့အကြောင်း ကျမကိုယ်ကိုအရင်းတည်ပြီးစံပြအဖြစ် ခံယူသွားမယ်၊ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရင် ဥပဒေရဲ့ စီရင်ခြင်းကိုခံရမှာ ဓမ္မတာပါဘဲ။ ကျမရဲ့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှကင်းဝေးရာဆိုတဲ့စာအုပ် အလကားရေးထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။
ကျမရဲ့ ယုံကြည်ရာ ကမ္ဘာကြီးကို စံနမူနာပြဖို့ ကျမကိုယ်နဲ့ရင်း ရေးထိုးပြခဲ့တာ။ ရှင်တို့လည်း ကျမလို သတ္တိရှိဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြ…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်….
မြန်မာပြည်ကြီးလည်းရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ပါစေဗျ။ပြည်သူများအားလုံးပဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
CRPH နှငျ့ NUG အပျေါ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မှတျခကျြမပေးမှု မငျးအောငျလှိုငျ ထုတျပွော
အာဆီယံ ၃ နိုငျငံကို သှားရောကျ လညျပတျမယျ့ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ခရီးစဉျမှာ မွနျမာ့အရေး ဦးစားပေးမညျ